I-Hideaway Too -I-Jolly Harbour yokubalekela i-covid iqinisekisiwe
(65 okushiwo abanye)
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Michelle
Uqinisekile ukuthi uzoyithokozela le 2BD enethezekile, i-villa engasemanzini. Itholakala kalula esizeni kuzo zonke izinsiza ezihlanganisa izindawo zokudlela, izitolo, nolwandle olunesihlabathi esimhlophe, yikho konke okufunayo ekhaya eliyipharadesi leholide.
LE mpahla IHLOLWE I-COVID YASE YAQINISEKA UHULUMENI WE-ANTIGUA NE-BARBUDA
I-villa inombhede ophindwe kabili egumbini lokulala elikhulu kanye nemibhede engusayizi wamawele emi-2 ekamelweni lesibili.Womabili amakamelo ane-air conditioner. Ikhishi lihlome ngokuphelele. Amathawula anikeziwe. Uma ukuhlala kwakho kungaphezu kwesonto futhi ungathanda izinsizakalo zokuhlanza ngaleso sikhathi, kunenkokhiso engu-$50 yokuhlanza ngakunye.
Amandla kagesi kule villa angama-220V, noma kunjalo akhona ama-transformer emishini yaseNyakatho Melika.
4.54(65 okushiwo abanye)
4.54 out of 5 stars from 65 reviews
4.54 · 65 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-65
Lona ngumphakathi ovulekile. Uzothola izakhamuzi zesikhathi esigcwele kanye nezivakashi.Ngezinyanga zasebusika kuzoba nabahambi abavela kuwo wonke umhlaba abahlala echwebeni.Izindawo zokuhlala zaseJolly Harbour ziza nazo zonke izinto ezitholakala esizeni umuntu ovakashele angazifuna noma azidingayo, Ikhemisi, isaluni yobuhle, izitolo zezipho, imoto, noma ukuqashwa kwezikebhe, isuphamakethe, indawo yokubhukuda, inkundla ye-racquetball, nezindawo zokudlela ezikhethiwe.
Umnikazi akaxhumani nezihambeli. Kodwa ngizokujabulela ukukusiza nganoma yimiphi imibuzo ongase ube nayo.